Qaramada Midoobe oo si adag uga hadashay laba kamida shaqaaleheeda oo lagu dilay degmada Kaxda. | XAL DOON
Home NEWS Qaramada Midoobe oo si adag uga hadashay laba kamida shaqaaleheeda oo lagu...
Qaramada Midoobe oo si adag uga hadashay laba kamida shaqaaleheeda oo lagu dilay degmada Kaxda.
Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa ka hadlay laba kamid ah Shaqaalahooda samafalka oo dhawaan lagu dilay weerar ka dhacay degmada Kaxda ee dulleedka magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
“Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa dilka laba ka mid ah shaqaalaha samafalka, oo la sheegay inay magaalo madaxda Muqdisho ku dileen dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab” ayaa lagu yiri Bayaanka.
Qoraalka ayaa intaasi raaciyay “Labada shaqaale samafal ee Soomaaliyeed waxay ku shaqeynayeen ololaha socday ee tallaalka cudurka dabaysha, ee ay soo qabanqaabiyeen Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay (UNICEF), Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Federaalka”.
Qaramada Midoobay ayaa hay’adaha amaanka Soomaaliya ugu baaqay in ay sameeyaan “ baaritaan buuxa ku sameeyaan dilalka, waxayna tacsi tiiraanyo leh u direen qoysaska dhibaatadda soo gaartay.
Shaqaalaha Qaramada Midoobay ayaa lagu dilay weerar ay ku dhinteen ugu yaraan 3 ruux oo ay ku jireen Labo gudoomiye Waaxeed oo ka tirsan degmada Kaxda iyo haweenay ka shaqaynaysay ololaha wacyi galinta ee UNIFEC.
Weerarkaas ayaa sidoo kale Weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay Taliyihii nabad sugida degmada Kaxda Cabdulqaadir Sheekh Maxamed iyo Todobo ruux oo kale sida ay ogaatay Mustaqbal.
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarka waxa ayna sheegtay in halkaasi lagu dilay ugu yaraan 6 ruux oo isku jirta askar iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir